भारतबाट प्रचण्डलाई एक युवाको खुल्लापत्र - Pahilo News
भारतबाट प्रचण्डलाई एक युवाको खुल्लापत्र
आदरणीय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ज्यू,
म कामकाजको खोजीमा भारतको मुम्बई पुगेको २२ वर्ष भयो । म परदेशमा भए पनि सधैँ सपना र विपनामा आफ्नो देशको सगरमाथा र मानव शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धलाई सम्झी गर्व गरिरहन्छु । अत्यन्तै कष्टबाट सुरु भएको मेरो जीवनमा थुप्रै उतारचढाव आए ।
म अछाम जिल्लाको षोडशा गाविस–३ मा जन्मेको हुँ । तपाईंहरुले सुरु गरेको जनयुद्धका कारण म जस्ता थुप्रै नेपाली युवाले जीवन गुमाएका छन् । तिनका बुद्ध आमा–बुवा र कलिला नानी–बाबुहरु र परिवारका सदस्य अहिले पनि छातीमा पीडा बोकेर बाँच्न विवश छन् । अनि हामी जस्ता लाखौँ युवा अर्काको देशमा काम गर्न विवश छौँ ।
यता पनि जनयुद्ध लडेका साथीहरुसँग भेट हुन्छ । उनीहरु आफ्नो कथा सुनाउँदै भन्छन्, बाबुराम र प्रचण्डले हामीलाई धोका दिए र आफू सत्तामा पुगे । उनीहरुले सोचेको सबै सपना पूरा भयो, हाम्रो कुनै पनि सपना पूरा भएन । के तपाईंको त्यस्ता युवाहरुसँग कहिल्यै भेट हुने गरेको छ ?
देशमा परिवार पाल्न गाह्रो हुँदा भारत, मलेसिया, साउदी अरबिया, कतार पुगेका लाखौँ युवामध्ये तपाईंले कहिल्यै कसैलाई भेट्नुभएको छ ? के तिनका पीडा सुन्नुभएको छ ? तपाईंको सत्ताको लेनदेनसँग के तिनको कुनै साइनो भेट्नुभएको छ ?
तपाइले देशमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाप्रति म अत्यन्तै नम्रताका साथ् धन्यबाद दिन चाहन्छु । नेपाली राजनीतिमा तपाईंको एउटा अलग्गै स्थान पनि बनेको छ । संबिधान घोषणामा तपाईंले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । तर, तपाईं त आकाशमा उड्ने गिद्ध र जंगलमा हिँड्ने ब्वाँसो भन्दा पनि स्वार्थी हुनुहुँदो रहेछ । नेपाली जनताले वाह–वाह गरेकै थिए तर तपाईं हृदयमा कपट र चरित्रमा भ्रस्टता भएको ब्यक्ति हुनुहुँदोरहेछ । किनभने, जब सरकारले देशमा जनमुखी बजेट पेस ग¥यो, तबदेखि तपाईलाइं बिमारीले छोइसकेको रहेछ । एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम ग¥यो भने आफ्नो पतन निश्चित छ भन्ने छोटो बुझाइको ठूलो असरका कारण तपाईं आत्तिनुभयो । तपाईंले यो कुरा बिर्सनुभयो कि बर्तमान सरकार एमालेको मात्र नभई देशमा प्रगति, उन्नति, शान्ति र संबिधान चाहने सबैको हो र मुख्य रुपमा तपाईंले बनाएको हो । तर, आज के त्यस्तो बाध्यता आइपर्यो र यस्तो लोकप्रिय सरकारका विरुद्धमा खनिनुभयो ?
तपाईंमा त चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छे, सीपी मैनाली र नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र होइन, सुजाता कोइरालामा जत्तिको पनि इमानदारी देखिएन । स्वाभिमानी, सार्बभौम र राष्ट्र भक्तिको भावनाबाट जागृत कुनै पनि नेपालीले तपाईंलाई माफ दिने छैनन् ।
अछाम, हालः मुम्बई भारत